“Wax caddeynayo in Dowladdeenu diidday dib u dhigista…
hogamiyihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo Warbaahinta hadal siiyay waxa uu ka hadlay Dacwadda Badda ee Soomaaliya iyo Kenya iyo dib u dhaca markale ku yimid dhageysigeeda.
Xasan Sheekh waxa uu sheegay in Xukumadda Federaalka aysan soo bandhigin Caddeymo muujinaya in diidmada Xukumadda ee la xiriirta in dib loo dhigo dacwadda, maadaama Kenya saddex jeer dalab Kenya ka yimid loo baajiyay go’aanka ICJ.
“Kaliya Dowladdeena waxa aan ka heynaa in ay sheegtay in aysan raalli ka ahayn dib u dhigista dacwadda, balse Madaxda Xukumadda kama heyno caddeymo ay soo bandhigeen oo ay la wadaageen Shacabka si loogu qanco, waxa aan isleeyahay heshiis labada Dowladood ayaa dib u dhigista sabab u ah” Xasan Sheekh Maxamuud.
hogamiyihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in sababta Dowladiisa ay dacwadda ugu gudbisay Maxkamadda Cadaaladda Caalamiga ee ICJ sidii xal nabadeed loogu dhameyn lahaa muranka labada Dowladood.
Madaxda Xukumadda waxa uu ku dhaliilay in ay xil wareejin ku sameysay shaqsiyaadkii Xukumadda hormuudka ugu ahaa Dacwadda Badda Soomaaliya iyo Kenya, sida Danjirihii Midowga Yurub Cali Siciid Faqi oo ay ka dhigtay Guddoomiyaha Baarlamaanka KGS iyo Axmed Cali Daahir Xeer ilaaliyihii hore ee Qaranka oo xilka laga qaaday.
“Dacwadda oo taagan ma xumaan xiriirka labada Dowladood, balse maanta weynu ognahay halka uu joogo, Madaxweynaha Kenya ayaa dalkeena soo booqday, Shirkii IGAD oo dalka laga qabtay ayuu ka qaybgalay, Qadiyarado badan oo heer gobol ama heer caalami ah ayay ku garab istaagtay Soomaaliya” ayuu yir hogamiyihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Dacwadda Badda Soomaaliya waxaa la gudbiyay sanadkii 2014-kii, xiligaas Dowladdii Hogamiye Xasan Sheekh waxa ay sheegtay in go’aankaas ay u qaadatay si xal caalami ah loogu dhameeyo kiiska.